Qaar ka mid ah Kaamirooyinkii lagu xiray jidadka Muqdisho oo qaraxyo lagu burburiyey – Hornafrik Media Network
Qaar ka mid ah Kaamirooyinkii lagu xiray jidadka Muqdisho oo qaraxyo lagu burburiyey
By Liibaan Nuur	 On Jan 30, 2020
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa siweyn looga maqlay xilligii Salaadii Subax ee saakay, jugta qaraxyo aad u culus, kuwaas oo lagu bur-buriyey kaamirooyinka ku xiray wadooyinka waaaweyn ee magaalada Muqdisho.
Kaamirooyinka la qarxiyey waaberigii hore ee saakay ayaa ku xirnaa wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, waxaana dhawaan ku xiray hey’adaha ammaanka dowladda Soomaaliya, si ay uga qeyb qaataan sugidda amniga.
Xilliga ay dhacayeen Jugta qaraxyada ayaa waxaa markii hore ay dadka u maleynayeen in hoobiyeyaal ay kusoo dhacayaan magaalada Muqdisho,hayeeshee markii uu waagii baryey la ogaaday in la qarxiyey qaar kamid ah kaamirooyinka lagu xirey meelo kamid ah wadada Maka Al-Mukarama.
Dad saakay tegay qeybo badan oo ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama ayaa sheegay in dhowr kaamiro oo kuwii wadada dhinaceeda surnaay ah la qarxiyey, kuwaas oo gebi ahaan burburay.
Goobaha wadooyinka ah ee lagu xirey Kaamirooyinka ayaa waxaa inta badan Bar-koontorool oo gaadiidka lagu baaro ku leh ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya, balse lama oga sababta keentay in kaamirooyinka la qarxiyo iyadoo ciidamada ammaanku sidaas ugu dhawyihiin.
Laamaha Ammaanka Soomaaliya weli wax war ah kama soo saarin kaamirooyinka la qarxiyey,waxaana saakay si caadi ah u shaqeynaya gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee wadada Maka Al-Mukarama oo ay ku xirnaayeen kaamiooyinka la qarxiyey.
Maxaad ka taqaannaa xeradii uu Hitler ku xasuuqi jiray Yuhuudda iyo waxa uu ku doortay meeshaas?
Madaxweyne Dani oo ku baaqay in qaab dhaqaale lagula diriro Al-Shabaab